Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika wuxuu u arkaa dib u magac bixinta dalxiiska waxbarashadu mustaqbalka dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika wuxuu u arkaa dib u magac bixinta dalxiiska waxbarashadu mustaqbalka dalxiiska
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • Education • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ruwanda News • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
dib loo shaaciyey
Jaamacada la kashifay ee Ruwanda waxay qabatay kulan labo maalmood ah oo la taaban karo oo cinwaankeedu ahaa “waxbarashada wax-ka-beddelka oo leh barnaamijyo koorso gaagaaban ah ku dhaji COVID 19 Xalka Shaqo la'aanta Afrika.
Ka dib markii uu soo ifbaxay aafada, waxaa isbadal ku yimid booskii wax lagu barto oo laga badalay meelihii loogu talagay oo loogu talagay qadka tooska ah, iyadoo jaamacada aduunka ee Reve Reve World University (RWU) ee ku taala Rwanda ay jawaab ka bixisay.
Dhacdadii labada maalmood socotey Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika wuxuu aqoonsadey xiriirka ka dhexeeya dalxiiska, waxbarashada, iyo shaqo la'aanta
Wadahadalka wuxuu kudhisanaa habab ku saabsan sida loo keenayo waxbarasho isbadal leh oo wax ka badali doonta nolosha Afrikaanka iyo bulshada iyadoo wax laga qabanayo arrimaha shaqada ee haatan jira.
Waa hadafka Jaamacadda Word oo shaaca laga qaaday si loo kiciyo hoggaamiyeyaal ruuxi ah oo ummad ka dhiganaya suuqa. Maamulaha Jaamacadda, Ku-xigeenka Jaamacadda, Sarkaalka Sare ee Fulinta, iyo saraakiisha kale ee ugu sareysa Jaamacaddan waxay ka soo qaybgaleen dood muhiim ah oo hordhac ah horaantii bishaan.
Wakiilo ka socda la-hawlgalayaasha jaamacadda ayaa sidoo kale ka soo qaybgalay sida Guddiga Dalxiiska Afrika, Haweenka Adduunka ee Isbedelka Hoggaaminaya, Haweenka Qiimaha Afrika, iyo Jaamacadda Caalamiga ah ee Maamulka iyo Maamulka.